ခက်မာ: ညရေစီး 1. 2.
မီးစနှင့်ထိုးထားသလိုပူလောင်သောနေရောင်အောက်တွင်ပူလောင်သောငရုတ်သီးတွေကို တနေကုန် တကုတ်ကုတ်ခူးဆွတ်ရသည်။ နေ့လည် ၁၂နာရီလောက်ဆိုအလုပ်နားပြီး ထမင်းစုစားကြသည်။ ဒန်ချိုင့် နှင့်ထည့်လာသောထမင်းနှင့်ငါးပိရည်၊ အင်ဖက်နှင့်ထုတ်လာသောထမင်းဟင်းနှင့်အသီးအရွက်များကို
ဝေမျှစားကာထွေရာလေးပါးပြောကြရသော ထိုအချိန်ကတနေ့တာအတွင်း ကျေနပ်ဖွယ်ရာအကောင်း ဆုံးသာအချိန်ဖြစ်သည်။ ထမင်းစားပြီး ချိန်ဆို စိုက်ပျိုးမြေပြင်တလျှောက်ထမင်းထုတ်ခဲ့သော အင်ဖက်တွေ ပျံ့ကျဲကျန်ရစ်တော့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ထိုစိုက်ပျိုးမြေထဲပျံ့ကျဲနေတာကတော့အင်ဖက်များမဟုတ်
တော့ပါ။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်များပင်။ တချို့ဆိုလေထဲမှာ ယိမ်းနွဲ့ကာ ကခုန်နေကြသေးသည်။
ကျမကသူ့ကိုအရူးတယောက်လိုပြန်ကြည့်မိသည်။ပြီးတော့မှကျမအမှားအတွက်နောင်တရသွားသည်။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေက ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲသူတို့မသိပါ။စီးပွားရေးသမားတွေအမြတ်များများ ရအောင် မီးသွေးဖုတ်ရောင်းကြသောဒီရေတော သစ်ပင်တွေကို သူတို့ကချွေးနှင့်ရင်း၍ခုတ်ပေးနေကြသည့် အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲသူတို့မသိပါ။ သူတို့သိတာကဒီနေ့အလုပ်လုပ်မှဒီနေ့ ထမင်းစားရမည်။
နေ့စဉ် ထမင်းနပ်မှန်နိုင်ဖို့ နေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေရသဖြင့် သူတို့ဘာမှမလေ့လာနိုင်ပါ။ ကမ္ဘာကြီး ၏အပြောင်းအလဲတွေကို သူတို့မကြားနိုင်မမြင်နိုင်ပါ။ သူတို့မြင်နေရသောစိုက်ပျိုးမြေထဲမှာ လွင့်ဝဲနေသည့် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကိုလည်း အန္တရာယ် ရှိသောအရာများဟု သတ်မှတ်ရကောင်းမှန်းသူတို့မသိကြပါ။
အခုတော့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေဝေ့၀ဲနေတာမဟုတ်သည့်အမေရိက၏တောရိုင်းမြေပြင်ကို ကျမရောက် ခဲ့ပြီ။ အိုင်အိုဝါကိုရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲ ငှက်နီခြံ ( Red Bird Farm) ကို Nature walk အနေနှင့် ကျမတို့ သွားရသည်။ Red Bird Farmသည်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေဝေ့၀ဲမနေတာကလွဲလျှင် မြန်မာပြည်ကတောအုပ်မြေများနှင့်သိပ်မကွာခြားလှပါ။ ကျမရှေ့မှ သွားနေသောစာရေးဆရာ တဦးက
နှာခေါင်းမှာဖန်စီနားကပ်လေးတပ်ထားပြီးဆံပင်ကိုအမည်းရောင်ဆိုးထားသောဂျာမာန်မလေးက မျက်နှာ ထားတင်းတင်းနှင့်ထိုသို့ပြောသည်။ပြီးတော့အဖိုးတန်သစ်ခွခင်းထဲကျသွားသောကျောက်တုံးတတုံးကို
ကျမဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတော့ငါးတွေကောက်ခဲ့ရသည်။ ကျောင်းအားချိန်ရောက် တိုင်းအိမ်နောက် ဖေးချောင်းကလေးမှာ ကျမတို့ငါးမျှားခဲ့ကြသည်။ ငါးမျှားရာမှာကျမပါနိုင်ပေမယ့်ချောင်းရေထဲငုတ်ပြီးငါးစမ်း ရာမှာတော့ ကျမမပါနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျမ၏ အိမ်နီးခြင်းသူငယ် ချင်းမေသင်းလဲ့နှင့်မေတင်အေးက ရေနည်းသော နွေရာသီကာလ၏နောက်ကျိနေသောချောင်းထဲမှာရေငုတ်ပြီးငါးစမ်းသည်။ အခါများစွာတွေမှာ ရေထဲငုတ် သွားပြီးပြန်ပေါ်လာချိန်ဆို သူတို့လက်ထဲမှာငါးတကောင်ပါလာတတ်မြဲဖြစ်သည်။
ချောင်းရေပြင်အောက်ကနွံနုန်းအနည်တွေကြားမှာငါးတကောင်ကိုစမ်းမိဆုတ်ကိုင်ထားရုံရှိသေး သူတို့က မိထားတာဘာငါးလဲသိနေပြီ။ စိတ်ညစ်စရာကောင်းအောင်အံ့သြ ရတာက သူတို့ပြောတာဘယ်တော့မှ မလွဲခြင်းပင်။ သူတို့ ကမ်းပေါ်ပစ်တင်ပေးသော ရွှံ့နုန်းအနည်များနှင့်လုံးထွေးနေသည့်ငါးတွေကို ကျမက ကမ်းပေါ်မှဆီးကောက်ကာ ၀ါးပလိုင်းထဲထည့်ပေးရသည်။ ငါးတွေ၏ အသက်ကိုသတ်ဖြတ်ရာမှာကူညီ
ပေးနေသည့် ကျမကိုအဘွားကဆူလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် နုန်းအနည်အနှစ်တွေနှင့်ရောထွေးပြီး တဖြတ် ဖြတ်ခုန်နေသည့်ငါးကိုရင်တထိတ်ထိတ်နှင့်ကောက် ဖမ်းရသည့်အရသာက အဘွားအဆူခံရတာထက် ပိုရင်ခုန်စရာကောင်းလေတော့ကျမလည်းတံငါနားနီး တံငါဖြစ်တော့သည်။
ကျမသူငယ်ချင်းတွေလိုမျက်နှာကလေးပဲရေပြင်ပေါ်ဖော်ပြီး၊တခါတရံရေအောက်ငုတ် ပြီးခြေလက်တွေနှင့် ချောင်းရေပြင်အောက်ပိုင်းရွှံ့နုန်းအနည်တွေကြားမှာယိမ်းနွဲ့ကူး ခတ်နေသည့်ငါးတွေကိုမိအောင်ဖမ်းရလျှင် ဘယ်လောက်များစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိုက်လေမလဲ။ ပီတိကို စိတ်ကူးနှင့်ပုံဖော်နေစဉ် ကျမညာဖက် ခြေမထိပ်မှာအောင့်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ မေတင်အေးလှမ်းပစ်ပေးသော ငါးဇင်ရိုင်း၏
ဘေးဆူးတောင်က ကျမညာဖက်ခြေမထိပ်ကိုမှ တည့်တည့်ဝင်စိုက်ရသတဲ့။ တစစယောင်ရမ်းကာကိုက်ခဲ လာသည့်ခြေမကိုကိုင်ရင်း ကျမတည လုံးအော်ဟစ်ငိုခဲ့ရသည်။ အဘွားကအဆိပ်နိုင်ဆေးရွက်ဟုခေါ်သော အရွက်တမျိုးကိုကြိတ်ခြေကာ ဒါဏ်ရာပေါ်မှာအုံပေးသည်။
"အဲဒါငရဲကြီးတာပေါ့။ ကိုယ့်ခြေမထိပ်ကလေးထိတာတောင်ဒီလောက်နာရင် သူများ အသက်တွေ တဖြတ် ဖြတ်နဲ့ လူးလွန့်ရုန်းကန်ပြီးမှသေအောင်လုပ်တာဘယ်လောက် ခံစားရမလဲစဉ်းစားကြည့်"
အော်ရင်းဟစ်ရင်း အဘွားအဆူကိုခံရင်းမှပင် ပလိုင်းထဲမှတဖြတ်ဖြတ်ခုန်နေသောငါးတွေကိုမြင်ယောင်လာ သည်။ ကျမက ငါးမဟုတ်လေတော့ငါးတွေသေကာနီး ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါ။ ဒါပေ မယ့် တနေကုန်နီးပါးချောင်းထဲမှာ ငါးစမ်းခဲ့ရသောကျမသူငယ်ချင်းများ၏ ထမင်းဝိုင်းကိုခံစားမိခဲ့တာတော့ အမှန်ပင်။ သူတို့ထမင်း ၀ိုင်းမှာ သူတို့စမ်း၍ရခဲ့သောငါးများမပါပါ။ သူတို့ရခဲ့သောငါးတွေကိုရောင်း၍ ပိုက်ဆံဖြစ်၊ အဲဒီပိုက်ဆံကဆန်ဖြစ်။ အဲဒီဆန်ကဖြစ်သောထမင်းနှင့် သူတို့ အိမ်နောက်ဖေးကွက်လပ်မှာ သဘာဝအတိုင်းပေါက်နေသောကန်စွန်းရွက်တွေကို ဟင်းအဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တော့ သူတို့အတွက်အသက် ဆက်နိုင်သောညစာဖြစ်ခဲ့ပြီ။
ကျမကတကိုယ်ကောင်းဆန်စွာပင် ငါးတွေသေရတာကို ကိုယ်ချင်းမစာနိုင်ပေမယ့် ငါးဖမ်းရင်းအသက်မွေး ရသော ကျမသူငယ်ချင်းတွေထမင်းဝိုင်းမှာငါးဟင်းမစားနိုင် တာကိုတော့ရင်နာရသည်။ သူတို့လိုဘ၀ခြင်း ဆင်သူ ကျမသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိသည်။ သူတို့လိုဘ၀မျိုးနှင့် ကျမသူငယ်ချင်းမဟုတ်သူတွေလည်း အများကြီးရှိသည်။ သူတို့ ထမင်းဝိုင်းတွေကိုရင်နာနေမိတာနှင့်ပဲကျမခြေထောက်ဆီအာရုံပြန်ရောက်ချိန် မှာတော့ ခြေထောက်မှတစစ်စစ်အနာကလျော့ပါးစပြုနေပြီ။ ပြီးတော့ပူလောင်နေရာမှတဖြည်းဖြည်းနွေး လာ၊ တော်ပါသေးရဲ့။
ကျမခြေထောက်မှာနောက်တခါနွေးထွေးမှုကိုခံစားရချိန်မှာတော့ ငါးဇင်ရိုင်းအဆိပ်ပျယ်သဖြင့်ခံစားရသော နွေးထွေးမှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်သည်။ ကျမလည်း ရွာနောက်ဖေးချောင်းရိုးကနေအိုင်အိုဝါမြစ်နံဘေး ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပြီ။ ငါးဘေးဆူးတောင်စူးခဲ့သောခြေမ၏ထိပ်မှာပင်ညှင်းသက်သက်၊ယားကျိကျိနွေးထွေးမှုကို ခံစားရသည်။ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ပေနှစ်ဆယ်ခန့်အကွာရှိမီးတိုင်အလင်းရောင်ကြောင့်ကျမခြေမကိုတရှုံ့ရှုံ့ နမ်းနေသောယုန်ကလေးတကောင်ကိုမြင်ရသည်။ အိုး.မီးခိုးရင့်ရောင်ကလေး။ မျက်လုံးကြောင်တောင်၊ နားရွက်ထောင်ထောင်နှင့် ကျမခြေထောက်ကိုစူးစူးစမ်းစမ်း ကြည့်နေသည်။ငါးများ၏အထိအတွေ့နှင့် ကွာသောထူးထူးဆန်းဆန်း အထိအတွေ့ကြောင့် ကျမကျောက်ရုပ်လိုငြိမ်ငြိမ်လေးဆက်ထိုင်နေမိသည်။
တော်ကြာသူထွက်သွားဦးမယ်။ ယုန်ကလေးကကျမခြေထောက်ကို သူ့အစာမဟုတ်မှန်းသိသွားချိန်မှာ
တော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက နှင်းစိုနေသောမြက်ဖုတ်တွေကြားပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
ညနေကလည်းအမြီးတဖွားဖွားနှင့်ရှဥ့်ကလေးတွေကို လူသွားလမ်းနံဘေးမှာပဲတလွှားလွှားတွေ့ရသေး သည်။ အိုင်အိုဝါမြစ်တလျောက်မှာလည်းဘဲတွေကအေးအေးလူလူ အစာရှာလို့။ တချို့ကအစာလုရင်း၊ တချို့ကချစ်သူလုရင်း ရန်ဖြစ်လို့။ တချို့ကတော့ စိတ်သဘောတူမျှချစ်ခွန်းတုန့် လှယ်လို့။ ကျမရောက်နေ တာအမေရိကားတဲ့လား။ ဒါးမ တချောင်းနှင့်သစ်ပင်တွေကြားတိုးဝင် ကာအဘွားခေါင်းလျှော်ဖို့တရော်
ချောင်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရအောင်ရှာ ခုတ်ခဲ့ရသည့်ရွာနဘေးကတောအုပ်ကလေးထဲရောက်နေသလို ခံစားရသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာအမေရိကားအစစ်ပါပဲ။
"အိုင်အိုဝါကသိပ်အေးချမ်းတာပဲ။ မြစ်ဘေးမှာသဘာအတိုင်းလျှောက်သွားနေတဲ့ဘဲတွေအများကြီး၊ ရှဥ့်ကလေးတွေလည်းအများကြီး၊ ယုန်ကလေးတွေကလည်းလမ်းဘေးတွေမှာလျှောက် သွားနေကြတယ်"
"ချက်စားမှာပေါ့ဟ။ ယုန်သားကသိပ်ချိုတာ။ ဘဲသားကလည်းသိပ်ကောင်းတာ။"
ကျမရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိလိုက်ပါ။ မြန်မာလူမျိုးများ၏သနားကြင်နာတတ်မှုနှင့်အကုသိုလ် ကင်းစင်လိုမှုစရိုက်ကောင်းများကို ဘယ်သူတွေ၊ဘာတွေကများဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာလဲ။ သေချာတာက
တော့ သူတို့မှာစားစရာလုံလုံလောက်လောက် ရှိနေလျှင် အေးချမ်းစွာပျော်ပါးနေသည့်တရိစ္ဆာန်လေးတေ ကို သတ်ဖြတ်စားဖို့စိတ်ကူးမိမှာမဟုတ်ဘူးထင်သည်။ သူငယ်ချင်းစကားကိုရယ်မောမိလိုက်ပေမယ့် ကျမငိုချင်နေသည်။ ဘာကြောင့်များ အိုင်အိုဝါရောက်မှခဏခဏငိုချင်နေမှန်းမသိတော့ပါ။
မနေ့ညကလည်းကျမငိုခဲ့သည်။ ညဦးပိုင်းမှာကျင်းပသည့်ပါတီကလေးမှာကျမ၀ိုင်ဖြူနှစ်ခွက်သောက်ခဲ့ သည်။ ရုတ်တရက်ကြီးအေးစိမ့်လာသောအိုင်အိုဝါ၏ရာသီဥတုက ၀ိုင်ဖြူကြောင့်နွေးထွေးခဲ့ရသည်။
နေရောင်နှင့်တွေ့တော့ရေခဲတွေအရည်ပျော်သလို ကျမရင်ထဲတွင်အေးခဲနေသည့် ၀မ်းနည်းမှုတွေက ၀ိုင်ဖြူနှင့်တွေ့တော့မျက်ရည်များ အဖြစ်ပျော်ကျလာသည်။မျက်ရည်စက်လက်နှင့်ပင်အေးစက်နေသည့် ညထဲမှာနွေးထွေးသောလက်တွေကိုကျမဆုတ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။တကမ္ဘာလုံးက လက်တွေကိုကိုယ်စားပြု သည့်လက်တွေ။ အာဂျင်တီးနားက၊ ရုရှားက၊ ချက်က၊ မွန်တာနီဂရိုက၊မလေးရှားက၊ ဟောင်ကောင် က...။...က။ သူတို့လက်တွေထဲကမေတ္တာတရားနှင့်စာနာနားလည်မှုက ကျမ ခန္ဒာကိုယ်ထဲကိုအင်အား များအဖြစ်စီးဝင်ကုန်သည်။ သူတို့က ကျမခံစားမှုကိုသိသတဲ့။ ကျမကိုနားလည်သတဲ့။ ကျမကိုသိတာ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုသိတာပဲပေါ့။ ကျမကိုနားလည်တာမြန်မာ လူမျိုးတွေရဲ့ဘ၀ကိုနားလည်တာပဲပေါ့။
ကျမ၏မြန်မာသူငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းပြောပြလျှင်လည်း သူတို့စာနာနားလည်မှာပါပဲ။ နော်ဝေ မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့်နေထိုင်နေသည့်သူငယ်ချင်းကကျမအမေရိကားရောက်နေသည်ဆိုတာသိသည် နှင့်ဆက်သွယ်လာသည်။ မိခင်မြေကိုဘယ် အချိန်ရောက်မှပြန်ခွင့်ရမည်မသိနိုင်ရှာသောသူငယ်ချင်းက သူမခံစားရမှုတွေကိုဖွင့်ဟလာသည်။ သူမအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြလာသည်။ သူမနေထိုင်သည့်တိုင်း ပြည်ကဘယ်လောက်အေးကြောင်း၊ သူမဘယ်လိုပညာသင်ရပုံ၊ ဘယ်လိုရပ်တည်ရပုံ၊ ဘယ်လိုပျော်အောင် နေရပုံတွေကိုပြောရင်းမှ မိသားစုပါတီလေးတခုဆီသူမရောက် သွားရပုံကိုပုံဖော်ပြ သည်။
"ရင်းနှီးသူတွေချည်းပဲစုလုပ်တဲ့ပါတီသေးသေးလေးပါဟာ။သိပ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ ကလေးတွေ ကမြက်ခင်းပေါ်မှာအပူအပင်မဲ့ဆော့လို့။ လူကြီးတွေကလည်းဝိုင်သောက်ရင်းစကားစမြည်ပြောလို့။ ဒီလိုဆို တော့လည်းလူ့ဘ၀ကြီးကနေပျော်စရာပါလားလို့တွေးနေရင်း ဗြုန်းကနဲငါ့တိုင်းပြည်အကြောင်းကို သတိရ သွားတယ်။ ငါ့မိသားစုဝင်တွေ၊ င့ါသူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းကိုသတိရသွားတယ်။ ငါကဒီမှာ အေးအေး ချမ်းချမ်း ၀ိုင်သောက်ရင်းကြည်နူးနေတယ်။ ဒီအချိန်မှာငါ့ အမေကဈေးရောင်းနေရတယ်။ ငါ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ သမီးလေးက နို့ဆာလို့တကျီကျီငိုနေရတယ်။သမီးကလေးရဲ့အမေငါတို့ သူငယ်ချင်းကတော့တောင့်တင်း နာကျင်နေတဲ့နို့အုံကခံစားမှုသမီးကလေးကိုလွမ်းဆွတ် ရင်းကပဲဒီကနေ့ညအဖမ်းခံရမယ့်ဘေးကလွတ်
အောင်ဘယ်မှာသွားအိပ်ရပါ့ မလဲလို့ ပူပင်စိုးရိမ်နေရရှာတယ်။ တခြား ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အချုပ်ခန်းတွေထဲမှာ၊ စစ်ကြောရေးစခန်းတွေထဲမှာ၊ ထောင်တွေထဲမှာ။ ငါမခံစားနိုင်တော့ဘူးသူငယ်ချင်း ရယ်။"
သူငယ်ချင်းကေသီ၏ရိုက်သံများသည် လေထုကိုဖြတ် ဂြိုလ်တုစလောင်းကိုကျော်၍ လျှပ်စစ်နားကြပ်မှ တဆင့် ကျမ ရင်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ကျမလည်းခုတော့သူ့လို ခံစားနေရပြီ။ ဒါပေမယ့်ကျမမှာသူ့လို ကိုယ့်ဘာသာစကားနှင့်စေးစေးပိုင်ပိုင်ပြောပြ တိုင်တည်စရာသူငယ်ချင်းတယောက်မှအတူရှိမနေပါ။ ကျမမမြင်ရပေမယ့်မည်းမှောင် ကော့ရွှန်းသောမျက်တောင်ထူထူများကြားမှယိုစီးကျလာမည့်ကေသီ့ မျက်ရည်တွေကိုနှလုံးသားနှင့်တို့ထိခံစားနိုင်လေသည်။ လောလောဆယ်ကျနေသည့် ကျမမျက်ရည်
တွေကိုတော့မတူကွဲပြားသောကမ္ဘာမြေ၏အစိတ်အပိုင်းအရပ်ရပ်မှရောက်လာကြသော သူငယ်ချင်းတွေ ခံစားတို့ထိနိုင်ကြလေသည်။
ဒါဟာငါ့မိသားစုပဲဟုတွေးမိသည့်ခဏမှာ ရုတ်တရက်ကြည်နူးသွားပေမယ့်ဒါဟာငါ့ရဲ့တကယ့်မိသားစု မဟုတ်ဘူးဟု ဆန်းစစ်မိသွားသည့်အချိန်မှာတော့ကြည်နူးမှုကို နာကျင်မှုကဖုံးလွှမ်းသွားပြန်သည်။ ကျမတို့တတွေကလောလောဆယ်အခိုက်အတန့် မှာတော့မိသားစုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော် တိုတောင်းသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ တွေ့ကြုံဆုံကွဲတဲ့။ မကြာခင်ခွဲခွာကြရဦးမည်။ ဒါပေမဲ့လောလော ဆယ်အခိုက် အတန့်အတွင်းကျသည့်မျက်ရည်များ အတွက်အားပေးဖော်တွေရှိနေတာကပဲကျမ၏ ကံကောင်းမှုဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်မှကျခဲ့သည့်မျက်ရည်တွေအတွက်ရော။ ဟင့်အင်း.။ မြန်မာပြည်မှာကျမငိုလေ့မရှိပါ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိစဉ်ကဘာကြောင့်များမျက်ရည်ကျလာလောက်အောင်ကိုအင်အား မရှိရတာလဲ။ တခါတရံဘေးနားကသားကလေးနိုးသွားမှာစိုးပြီးတိတ်တိတ်ကလေးကြိတ်ရှိုက်ခဲ့ရဖူးသည်။ ကြေမွနာကျင် နေသော အတွေးတွေကကောင်းကင်အနှံ့ပျံ့ကျဲနေသောလည်းလူကသင်ဖြူးဖျာခင်းထားသော အိပ်ရာ ကလေးပေါ်မှာ တုတ်တုတ်မလှုပ်ငြိမ်သက်လျှက်။ သက်ပြင်းဖြည်းဖြည်းချ၊ ကြိတ်ရှိုက်။
ဒီအိုင်အိုဝါမှာတော့ဖြင့် အားရပါးရငို။ အားရပါးရမျက်ရည်သုတ်၊အားရပါးရရှိုက်။ငိုရလွန်းသဖြင့်မောပန်းပြီး မျက်ရည်တွေအလိုလိုခြောက်ကာနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။
အိပ်ရေးဝသွားပြီ၊ စာထရေးမယ်ဟုစဉ်းစားလိုက်ချိန်မှာပဲ ထိုအဘွားအိုကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားသောအဘွားအိုက ကျမကုတင်ဘေးမှာ ဒူးတချောင်းထောင်၍ အကျအန ထိုင်နေသည်။ ကျမကိုမမိတ်မသုန်ကြည့်လျှက်။ အား.. သူဘယ်သူလဲ။
ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာနောက်တယောက်။ သူမကတော့သက် လတ်တမ်းလောက်။အနီရောင်အင်္ကျီဝတ် ထားသည်။ ပြတင်းပေါက်ဘောင်ကိုမှီရင်း ကျမကိုခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်နေသည်။ သူတို့ဘယ်သူတွေလဲ။
ကျမအိပ်နေရာမှဝုန်းကနဲ ထထိုင်လိုက်သည်။ အိပ်ရာဘေးကမီးအုပ်ဆောင်းကိုဖွင့်လိုက်သည်။ လှုပ်ခတ်ဝေ့၀ဲ စရာခန်းဆီး မရှိသောပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးများမှတဆင့် မြစ်နံဘေးမီးတိုင်များမှ အလင်းရောင်ဝါကျင့်ကျင့်တွေထိုးဖောက်ဝင်နေတာကိုသာမြင်ရသည်။ ကျမအိပ်ရာခြေရင်းကအနက်ရောင် ရေခဲသေတ္တာကို အနက်ရောင်ဝတ်အဘွားအိုဟု ထင်မိတာလည်း မဖြစ်တန်ရာပါ။ ဒါဆို သူတို့ဘယ်သူတွေ လဲ..။
သူတို့လိုပဲ ကျမကိုမမိတ်မသုန်စိုက်ကြည့်နေသည့်အဘွားအိုတဦးကို လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်ခန့်က ကြုံဖူး သည်။ ပုသိမ်မြို့က၀ိပဿနာတရားစခန်းတခုမှာဖြစ်သည်။ ကျမကထိုင်ပြီးရှုမှတ်ချိန်တွင် ငိုက်မြည်းတတ် သလောက် စင်္ကြန်လျှောက်ရှုမှတ်ချိန်တွင်စိတ်ကြည်လင်တတ်သမို့စင်္ကြလျှောက်ရှုမှတ်ဖြစ်တာများသည်။
အဲဒီလိုရှုမှတ်နေတုန်းမှာပေါ့။ တရားရိပ်သာစင်္ကြလမ်း၏ တခုသောတိုင်လုံးကိုမှီ၍ရပ်နေသော ထိုအဘွားအို ကိုကျမမြင်လိုက်တာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူမကိုကျမကြည့်နေတာမဟုတ်ပါ။ လမ်းလျှောက်ရှုမှတ်ရင်း အာရုံအရ မလှမ်းမကမ်းမှာယောဂီရောင်ဝတ်စုံနှင့် အဘွားအိုတယောက်ရပ်နေတာသိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကြွတယ်၊ လှမ်းတယ်၊ ချတယ်။
မှတ်သားရင်းကပင်သူမအနား ကျမနီးလာပြီ။ လက်တကမ်းအကွာရောက်မှာ သူမ လက်ကကျမပခုံးကို လာထိသည်။ ကျမသတိလက်လွတ်လှည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ဟင်...အဘွားအိုမှမဟုတ် တာပဲ။ ပီပြင်ထင်ရှားလွန်းသောအရိုးစု တခုကကျမပခုံးကို လာထိလိုက်တာတော့မဟုတ်တန်ရာပါ။ ဒါထင်တာပဲ၊ မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်မဟုတ်ဘူး။ ပြန်မှတ်။
ကျမက မနက်လင်းအားကြီးမှာမြင်ခဲ့ရသော မြန်မာမဟုတ်သည့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအကြောင်းကို ကျမ၏ ဥရောပသားသူငယ်ချင်းကိုပြောပြတော့ သူကမေးသည်။
သူကသည်လိုပြောရင်း ကျမမျက်နှာကိုစူးစူးစမ်းစမ်းကြည့်နေချိန်မှာကျမကတော့လွန်ခဲ့သော ၁၅နှစ်ခန့်က ကြားခဲ့ဖူးသည့်စကားတခွန်းကိုပြန်အမှတ်ရလာသည်။
"ငါ့ညီမကို မမြင်ရတဲ့အရပ်ဒေသက အမျိုးသမီးကြီးတွေကစောင့်ရှောက်တယ်။ ညီမရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာဖြစ် စေ၊ အာရုံထဲမှာဖြစ်စေ အမျိုးသမီးကြီးတွေကိုမကြာခဏမြင်ရလိမ့်မယ်။"
ကျမကိုအဲဒီလိုပြောသူကိုယ်တိုင်က ကျမအားဖေးမကူညီနေကျအမျိုးသမီးကြီးတဦး ပင်။
"ဟုတ်တယ်။ ကျမအိပ်မက်တွေထဲမှာ အမျိုးသမီးကြီးတွေကိုခဏခဏတွေ့ရတယ်။ ကျမရဲ့ အဘွား အပါအ၀င်ပေါ့။ သူတို့ကကျမကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ သူတို့က ကျမကိုဘာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေ ကြတာလဲ။"
ကျမ ကြည်သည်းနည်းနည်းထသွားသည်။ ကျမကအမိုက်အမှားတွေပြုလေ့ရှိတတ်သူမို့ ကျမကိုဖေးမလမ်း ညွှန်စောင့်ရှောက်ပေးချင်တာများလား။ ကျမဆီကသူတို့တောင်းဆိုစရာတော့ ဘာမှရှိမည်မထင်ပါ။ ကျမ ညစဉ်ပဌာန်း ရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့။ အမျှပေးဝေနေကျပဲ။ ကျမမှာ ပေးစရာဒါပဲရှိသည်။ ကျမကိုအမျိုးသမီး တွေကစောင့်ရှောက်သတဲ့လား။ ကျမကိုကူညီဖေးမစောင့်ရှောက်သော အမျိုးသားတွေလည်းအများကြီး ရှိနေပါသည်။ ဒါဆို ကျမကကံကောင်းသူပေါ့။ သို့သော် ကျမကိုချစ်ခင်ဖေးမလို၍မဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်
အိုင်အိုဝါသည်ပဉ္စလက်ဆန်စွာ နွေခေါင်ခေါင်မှဆောင်းဦးကိုကျော်၍ ဆောင်းစစ်စစ်ဖြစ်သွားပြန်သည်။
နွေရာသီ အပူချိန်အပူချိန် ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှလာသောမြန်မာမလေးသည် ၃၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်
အောက်အအေးထဲတွင် အနေရခက်လှသည်။အခန်းထဲမှာနေတာနည်းနည်းကြာလာတာနှင့် ခြေဖျား လက်ဖျားတွေအေးစက်လာသည်။ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့နေရောင်က၀င်းပနေသည်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ပူပြင်းလွန်းသဖြင့် ကျမမုန်းသောနေရောင်ခြည်ကို အိုင်အိုဝါမှာတော့ မက်မော ရလွန်းပြန်သည်။ အိုင်အိုဝါမှာပူသောနေက အအေးဒါဏ်ကိုသက်သာသလိုခံစားရစေသည်။ သို့သော်
နေရောင်ခြည်အောက်မှာတိုက်ခတ်လာသောလေကစိမ့်နေပြန်သည်။ နေပူတာကသပ်သပ်၊ လေအေး တာကသပ်သပ်။
အခါများစွာမှာတော့ ကျမအခန်းထဲမှလှမ်းမြင်နေရသောအိုင်အိုဝါမြစ်ကိုငေးကြည့်မိတတ်သည်။ သည်လို
ငေးကြည့်မိသည့်အခါတိုင်း အေးစိမ့်သည့်ညတညမှာ ကျမနှင့် အတူမြစ်နံဘေးမှာထိုင်ရင်းပြောခဲ့သည့် ကျမသူငယ်ချင်းကိုးရီးယားက ကဗျာဆရာမ ရာဟီဒေါက်ပြောခဲ့သောစကားတွေကိုပြန်ကြားယောင်သည်။
"ညဖက်မှာစီးဆင်းတဲ့မြစ်ရေဟာ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ အပေါ်ယံမျက်နှာ ပြင်မှာတော့ရေစီးကငြင်သာနုညံ့နေတယ်။ဒါပေမယ့်မြစ်အောက်ခြေအတွင်းသားကတော့လှုပ်ရှားရုန်းကန် နေတယ်။ အဲဒီလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေမှုကမမြင်သာဘူး။ မြစ်ကိုယ်တိုင်နဲ့မြစ်ရေစီးအကြောင်းလေ့လာနေသူ
မြစ်တဖက်တချက်မှအ၀ါရောင်မီးတိုင်များ၏အလင်းကြောင့်လှိုင်းမွမွလေးတွေကိုမြင်နေရသော အိုင်အိုဝါ မြစ်၏မျက်နှာပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်း ရာဟီဒေါက်ကပြောခဲ့တာဖြစ်သည်။ ကျမကတော့ ကဗျာဆရာမပီသ
သောသူမမျက်နှာကို ငေးကြည့်နေခဲ့မိသည်။မြစ်ကိုငေးကြည့်၍၀ချိန်မှာတော့ ကျမအခန်းထဲ ပြန်၍ မျက်နှာမူလိုက်သည်။
စောင်ပုံကြီးအောက်တိုးဝှေ့ပြီး အိပ်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာတော့ကျမနားထဲမှာအသံတွေကြားလာရသည်။ ကျမမျက်စိထဲ မှာပုံရိပ်တွေမြင်လာရသည်။ကျမမြင်နေကြားနေရတာက ကမ္ဘာအ၀ှမ်းမှ ကံဆိုးသူလူသား များ၏ နာကျင်ပူဆွေးငိုကြွေးသံများနှင့်ပုံရိပ်တွေဖြစ်သည်။ ထိုအသံတွေပုံရိပ်တွေဖြစ်လာအောင် ဘယ်သူဖန်တီးနေတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ကျမတို့ကပဲဖန်တီးခွင့်ပြုနေတာလား။
အိပ်မက်နှင့်လက်တွေ့ဘ၀တွေကဆင်တူရိုးမှားတွေဖြစ်နေသည်။ ကျမတို့တတွေက ကျမတို့ဖြစ်စေချင် သလိုမဖြစ်ပဲ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေသောကမ္ဘာကြီးထဲတွင် နေနေရသောသူတွေဖြစ်သည်။ ဖြစ်စေချင်သလိုဖြစ်မလာသောဘ၀များအတွက် ဘာကိုမှန်းမသိ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှန်းမသိ မုန်းမိသော အမုန်းက ကျမကိုနာကျင်ပင်ပန်းစေသည်။ သို့သော်ရင်ထဲတွင်ရှိနှင့်ပြီးသောချစ်ခြင်းတရားက ထိုအမုန်း နတ်ဆိုးများကို တဖန်တိုက်ခိုက်မောင်းနှင်ထုတ်နေပြန်သည်။
ကျမခန္ခာကိုယ်သည်စောင်ပုံကြီးအောက်တွင်တုတ်တုတ်မလှုပ်ငြိမ်သက်နေသော်လည်း ကျမရင်ထဲတွင် တော့ နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုများ၊ စိုးရိမ်သောကများ၊ အမုန်းများအချစ်များဖြင့်လှိုင်းထန်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
ဒီလိုဆိုလျှင်ဖြင့်ကျမကိုယ်တိုင်ကညရေစီးတခုဖြစ်နေပြီပေါ့။ ကျမရင်တွင်းမှညရေစီးသည် ကျမအခန်း
ဘေးမှအိုင်အိုဝါမြစ်မှညရေစီးနှင့်အပြိုင်တိတ်ဆိတ်သောဆူညံရုန်းကန်မှုများနှင့် လှုပ်ရှားစီးဆင်းလျှက် ရှိသည်။
ကျမတို့တတွေက မြစ်တစင်းအတွင်းအတူစီးဆင်းသောရေစီးကြောင်းတွေဖြစ်ကြမည်ဆိုလျှင် ကျမက မြစ်အောက်ခြေမှစီးဆင်းသော ညရေစီးကြောင်းတခုဖြစ်ပါရစေ။
ကျမကြားနေရသောငိုကြွေးသံပိုင်ရှင်လူသားများကိုတော့ ညဖက်စီးဆင်းသောမြစ်ရေစီး၏မျက်နှာပြင်လို နုညံ့ငြင် သာစွာစီးဆင်းခွင့်ရစေချင်ပါသည်။ အေးမြသောရေလို ငြိမ်းချမ်းခွင့်ရစေချင်ပါသည်။
Sofar Away Fromu Says:
Font Size က တော်တော်သေးတယ် ဆရာမ
ချဲ့ ပြီး ကြည့်ရတယ်...
ဆရာမ အရေးအသားကို ဟိုးအရင် မျက်နှာဖုံး ဆောင်းပါး မှာ ထဲက ကြိုက်ခဲ့တာ..
ညရေစီး တလျောက် .. စုံနေအောင် ဆင်းသွားတယ်..
font size သေး၍ မမြင်/ဖတ်ရ သူများအတွက် Mozilla Firefox နဲ့ ဖတ်ပါ။ (မြင်ကွင်းကျယ်>> Ctrl နှင့် + (သို့ ) မြင်ကွင်းကျဉ်း>> Ctrl နှင့် - )ကိုတပြိုင်တည်းနှိပ်ပါ။.... ရေပူ၊ရေအေး၊ နွေးတေးတေးကဲ့သို့သော...ရသ ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါ၏ ။ (တစ်ခုမေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျ...“ ကြည်သည်းထ = ကြက်သည်းထ ”.. အတူတူပါပဲလား။ (သို့)ရေးတော့ အမှန်၊ ဖတ်တော့ အသံ ဆိုတာ မျိုးလား။ လမ်းညွန်ပေးပါဦး အစ်မရေ။ တကယ်မသဲကွဲလို့ ပါ။